ओली–प्रचण्ड टकरावले शिवमाया सभामुख बन्ने संकेत – HostKhabar ::
ओली–प्रचण्ड टकरावले शिवमाया सभामुख बन्ने संकेत
काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको टकरावले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुख बन्नेतर्फ राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्न थालेको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको सत्तारुढ नेकपाभित्र अहिले पनि स्पष्ट रुपमा पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादी धार देखिन्छ ।
यही धारले पनि सभामुख चयनमा प्रभाव पारिरहेको छ । तत्कालीन समयमा पूर्वमाओवादीको भागअनुसार कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए । तर, उनले आफूमाथि यौनदुराचारको आरोप लागेपछि सभामुखबाट राजीनामा दिए । अहिले प्रचण्ड पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाउन चाहन्छन् । जसका लागि अग्नी सापकोटाको नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रचण्डको प्रस्तावविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमाले पक्षबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम अघि सारेका छन् । दुवै आ–आफ्नै अडानमा देखिँदै आएका छन् । बेला बेला उनीहरुबीच सहमति भएको चर्चा हुने गरेपनि हालसम्म कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा निचोडमा पुगेका छैनन् ।
महिला सशक्तिकरणमै विद्यावारिधि गरेकी डा. तुम्बाहाङफे पनि सभामुख पदको दाबी गरेर बसेकी छन् । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ रहेको बताइन्छ । पूर्व एमालेबाट सभामुख बनाएमा पूर्वमाओवादीको भागमा केही पनि नरहँदा पार्टी नै विलय गराएका भान हुने प्रचण्डको बुझाइ रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि पूर्व एमाले पक्षधरलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको साथ पाएकी तुम्बाहाङ्फे पूर्व एमालेकी हुन् । यसर्थ अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली पनि तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउन सहमत हुन सक्ने देखिन्छ ।